पहिले पहिले परापूर्वकालमा राजा महाराजाहरुले आफ्ना दरबारमा नर्तकीहरु राख्ने गर्थे । नाच्ने मान्छेहरु राख्ने गर्थे । जसको सौन्दर्यमा ती राजा महाराजाहरु लट्ठिने गर्दथे । अहिलेको युगमा त्यो फरक भइसकेको छ । ती राजा महाराजाहरु परास्त भएर युग जसरी आधुनिकीकरण भएको छ । जसरी परिवर्तित भएर आधुनिक भइसकेको छ । त्यसैगरी ती नर्तकीहरु आज सौन्दर्य प्रतियोगिताको स्टेजहरुमा देखिन थालेका छन् । आज ती नर्तकीलाई पहिले राजा महाराजाले हेर्ने गर्थे । आज सिंगो विश्वले हेर्ने गर्छ । तिनको उपहास गर्छ । उनीहरुले लाउने छोटो लुगा र उनीहरुको गोरो छालाको सबैले ताली वाह वाह गर्छ ।वास्तवमा अहिलेको आधुनिक युग , विज्ञानको युग , ज्ञानको युग , अहिलेको सभ्य युग भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्ने गर्छौँ । यो युगमा के बाहिरी छालालाई हेर्नु , बाहिरी छाला र उनीहरुले लाउने कपडालाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्नु राम्रो कुरा हो ? यस कुरामा म सहमत छैन । के म्याडम क्युरी नराम्री थिइन् ? के फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल नराम्री थिइन् ? दूई वटा हात नहुने ,दुई वटा खुट्टाले खाना खाने झमक घिमिरे के नराम्री छिन् ? सौन्दर्यता छालाबाट मापन गर्न सकिन्छ ? यो हुदैँ नहुने कुरा हो । सौन्दर्यताले वास्तवमा समाजमा विकृति निम्तियाउँछ । सौन्दर्य प्रतियोगिताले नारीहरु उनीहरु सौन्दर्यका प्रतीक मात्रै हुन् भनेर देखाउने शिवाय केही गर्न सक्दैन । सौन्दर्य प्रतियोगिता होइन अब विवेकको प्रतियोगिता हुनुपर्छ ।यो आधुनिक युगमा देखिएको लैङ्गिक असमानताको प्रतीक हो सौन्दर्य प्रतियोगिता । यसलाई अबका युवाहरुले , अबका हामी बुझ्ने मानिसहरुले , हामी बुझ्ने भनाउँदाहरुले यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ । जबसम्म सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा फेरि हाम्रा चेलीहरु चटकी बनेर नाङ्गिन्छन् तबसम्म सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा लैङ्गिक असमानताको फेरि अहिलेको आधुनिक युगमा आएर उजागर गर्ने गरिन्छ । आधुनिक युगमा आएर लैङ्गिक असमानताको असमान प्रयोग गर्ने गरिन्छ तबसम्म यो समाज यी चेलीहरु सौन्दर्यताको प्रतीक शिवाय केही हुने छैनन् ।अब त चेलीहरुलाई समानताको कुरा देखाउन जरुरी छ । अब उनीहरुलाई समान पहुँचको जरुरी छ ।अब उनीहरुलाई सामाजिक दायित्वप्रति अग्रसर गराउन जरुरी छ । अबका चेलीहरु मिस युनिभर्स होइन , मिस नेपाल होइन , मिस तराई होइन , मिस मंगोल होइन , फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल बन्नुपर्छ , म्याडम क्युरी बन्नुपर्छ ,प्रजातान्त्रिक नेत्री आङसाङ सुकी बन्नुपर्छ ।हामी आधुनिक युगका सभ्य युगका सचेत नागरिकले यो बुझ्न जरुरी छ की सौन्दर्य प्रतियोगिता हाम्रो समाजको विकृति हो । आधुनिकताको खोल ओढेको मानवतालाई निर्ममतापूर्वक हत्या गर्ने एउटा संस्कार हो । यसको जबसम्म अन्त्य हुन सक्दैन तबसम्म नेपालको महिला मुक्ति अर्थात् विश्वको महिला मुक्ति सम्भव रहन सक्दैन । महिला मुक्तिका लागि , महिला समानताका लागि सौन्दर्य प्रतियोगिता होइन विवेकको प्रतियोगिता चाहिन्छ । सौन्दर्य प्रतियोगितामा खर्च गर्ने पैसा हुम्ला , जुम्ला ती विकट ठाउँमा डोको बोकेर घाँस काट्ने चेलीहरुको लागि उनीहरुको शिक्षामा खर्च गरियोस् । ग्रामीण क्षेत्रका पिछडिएका महिलाहरुको जीवनस्तर उकास्ने कार्यका लागि खर्च गरियोस् । सौन्दर्य प्रतियोगिताको आयोजना गर्नु भन्दा महिलाहरुको लागि विवेकको प्रतियोगिता आयोजना गरियोस् । जसले गर्दा हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको पहुँच बढोस् ।अहिले पनि हाम्रो समाजमा महिलाहरुलाई तल्लै दर्जामा राखेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणकै रुपमा लिदाँ एउटा घरमा छोरीले डिग्री पढेकी होस् , छोराले एस.एल.सी. मात्र पास गरेको होस् तर छोरीको योग्यता र तार्किकतालाई होइन समाजले छोराको अव्यवहारिकपनलाई नै दर्जा दिएको हुन्छ । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने महिला भनेको सौन्दर्यको प्रतीक हो भन्ने कुरा । यसर्थ महिला अलङ्ककारमा सजिएर नै बस्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यताले महिलाहरुलाई नै कमजोर सिद्ध बनाएको छ । कुनै पनि स्कुल होस् , क्याम्पस होस् , विश्वविद्यालय होस् , कुनै सरकारी कार्यालय नै किन नहोस् । अझ भनौँ निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरु उनीहरु बौद्धिक र तार्किक भएपनि उनीहरुको बौद्धिकतालाई र तार्किकतालाई सम्मान गरिदैँन । उनीहरुलाई सधैँ तल झार्न र पार्न खोजिन्छ । किनभने हाम्रोे सङ्किर्ण मानसिकताले गर्दा महिलाहरु बौद्धिक ,तार्किक हुदैनन् भन्ने मान्यता घर देखि लिएर समाज र कार्यालयसम्म हावी रहेको छ । महिलाहरु भनेको सौन्दर्यताका वस्तु हुन् भन्ने कुरा जबसम्म मानसिकताबाट हटाउन सकिदैन तबसम्म अशिक्षित महिलाहरु हुन् वा शिक्षित महिलाहरु सधैँ पीडित नै हुन्छन् । यसर्थ अब हरेक छोरीहरुले सौन्दर्य प्रतियोगितामा भन्दा पनि विवेकको प्रतियोगितामा भाग लिन जरुरी छ ।